नयाँ वर्ष २०७४ मनाइँदै » खबरहरुको एउटै केन्द्र
शुक्रबार, बैशाख १, २०७४ ०७:४१ मा प्रकाशित !
१ बैशाख, काठमाडौँ। आज विक्रम संवत २०७४ वैशाख १ गते नयाँ वर्षको पहिलो दिन नेपालभर एकआपसमा शुभकामना आदानप्रदान गरी मनाइँदैछ । सूर्यले मीन राशिको भोग समाप्त गरी मेष राशिबाट भोग सुरु गर्ने दिन आज वैशाख सङ्क्रान्ति अर्थात मेष सङ्क्रान्ति तथा वर्षको पहिलो दिन पनि हो ।
आज हरेक व्यक्तिले गत वर्ष गरेका कामको सफलता÷असफलता मूल्याङ्कन गरी असफलता दोहरिन नदिने र सफलता पाउन नयाँ योजनाको सङ्कल्प गर्दछन । यस अवसरमा आज बिहानै स्नान गर्ने, घर–आँगन सफा गर्ने, देवदेवीको दर्शन गर्न मन्दिर जाने, मीठोमीठो खाने, साथीसङ्गति तथा इष्टमित्रसँग भेटघाट गरी एक आपसमा शुभकामना साटासाट गर्ने गरिन्छ ।
इतिहासकार प्राडा दीनेशराज पन्त मल्लकालदेखि नेपालमा मौलिक संवतका रुपमा विसं चलेको बताउनुहुन्छ । “नेपालमा मात्र मौलिक रुपमा यो संवत चल्छ, भारतमा सरकारी संवत शक संवत भए पनि व्यवहारमा इस्वी संवत चलेको छ”–उनले भने।
राजा विक्रमादित्यले चलाएको संवत भएकाले यो संवत्लाई विक्रम संवत भनिएको तर्क पनि एकथरिले गर्ने गरेका छन । यस अवसरमा आज नेपालभरका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान एवम शिक्षण संस्थामा सार्वजनिक बिदा दीन्छ ।
काठमाडौँको उत्तर पश्चिमी भेगस्थित टोखाको खहरे अर्थात सपन तीर्थमा आजका दिन स्नान गरेमा कुष्ठरोग एवम लुलो लङ्गडोपना हटी पुनः शारीरिक तन्दुरुस्तता प्राप्त हुने जन विश्वास छ ।
PREVIOUS POST Previous post: अब मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क
NEXT POST Next post: भक्तपुरको बिस्केट जात्रा आज बिहानैदेखि सुरु
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, बैशाख १, २०७४ ०७:४१
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, बैशाख १, २०७४ ०७:४१
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, बैशाख १, २०७४ ०७:४१
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, बैशाख १, २०७४ ०७:४१
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, बैशाख १, २०७४ ०७:४१